Wasaaradda Caafimaadka oo sheegtay in Soomaaliya ay ka mid noqotay waddamada uu hoos uga dhacay Halista Cudurka Duumada – Radio Muqdisho
Wasaaradda Caafimaadka oo sheegtay in Soomaaliya ay ka mid noqotay waddamada uu hoos uga dhacay Halista Cudurka Duumada
Wasaaradda Caafmaadka Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ku guuleysatay ka mid ahaanshiyaha waddamada uu Hoos uga dhacay Cudurka Duumada.
Agaasimaha Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Soomaaliya mudane Cabdiqani Sheekh Cumar oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in Soomaaliya ay heshay fursad ay ku Ciribtirto Qatarta Cudurka Duumada ama malariyada oo ka mid ah kuwa saameenta ku haya dadka Soomaaliyeed,isagoo sheegay in goobaha ugu badan uu ka yimaado cudurkaas ay tahay meelaha biyo fariisinka ah iyo xarumaha ay ku noolyihiin dadka Barakacayaasha.
“Dhimashada iyo la Bugaanshiyaha Cudurkaan Duumada Gaar ahaan Carruurta ka yar Shanta Sano iyo Hooyooyinka Uurka leh waynu yareynay, Tusaale Sanadkii 2010 ’kii waxaa jirtay halista Cudurkaan waxaa la jiraday 226’000 waxaa u Dhintay 50’000 inagoo yareynay halistaas waxaan goobaha Caafimaadka siinay Daawooyinka ka hortagga Cudurka malariyada,inagoo wacyi gelin u samaynay Bulshada Soomaaliyeed” ayuu yiri Agaasimaha Wasaaradda Caadfimaadka.
intabadan Bulshada Soomaaliyeed ayaa u badan kuwo aan helin adeegyo dhamaystiran oo Dhanka Caafimaadka ah iyagoo qaarkood aynan awood u leheen in markasta ay xiriir la soo sameeyaan Dhakhaatiirta Caafimaadka hase yeeshee Wasaaradda Caafimaadka Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo gaashanaysa Hay’adaha Dhinaca Caafimaadka ayaa wadda dadaallo lagu yareynayo Cudurrada Qatarta ah ee Sameeya Nolosha Qofka.
Saraakiil ka tirsan Guutada koowaad ee ciidanka xoogga dalka oo siminaar loo soo gabo gabeeyay “SAWIRRO”
Saraakiil ka tirsan Guutada koowaad ee ciidanka xoogga dalka oo siminaar loo soo gabo gabeeyay "SAWIRRO"